RAHA IZAHO NO HO FILOHA, …
Madagasikara, ilay Nosy miavaka sy meva ary tsara.
Kilasiana koa, ho ilay Firenena mahantra indrindra.
Ny mponina ao mivavaka, eny hatreny amin’ny alitara.
Nosy hanan-karena, raha toa ka manova ny famindra.
Ny fandrosoany dia hiankina amin’izay lany ho Filoha,
Na izaho, na ianao, na izy, samy mety hatao daholo ;
Raha toa mahay manentana, ny Malagasy rehetra hifoha.
Ka mba ho marisika amin’izay, ny tena hanova ny tontolo.
Alohan’ny rehetra aloha, dia ho ankinina amin’i Tompo,
Ny vina ny fampandrosona, izay eritreretina ny ho hatao.
Ka Izy no hanolo-tsaina, ho an’ireo rehetra izay hanompo,
Vonona ny hamadika ity Firenena efa tonta, ho lasa vao.
Ny toe-tsaina miankin-doha, mila hovaina tanteraka.
Mba hanan-kambo amin’izay, ka ho tena Malagasy.
Hiezaka hihoitra miaraka, fa tsy hanao tanty reraka.
Hisaina ho tena Malagasy, fa tsy ho vazaha taratasy.
Ho vaindohan-draharaha, ny fandriampahalemana.
Havaozina ny fampianarana, hifanaraka amin’ny filàna.
Kajiana ny fahasalamana, ho laharam-pahamehana.
Ny olona rehetra hitovy, samy eo ambanin’ny lalàna.
Ny fambolena sy ny fiompiana, dia ho ezahina hivoatra.
Ny harena ankibon’ny tany, ho trandrahana ara-drariny.
Ka mba tsy hisy intsony, ny Malagasy tezitra hitroatra ;
Satria hahatsapa hahazo tombony, raha hajaina ny rariny.
Ny harena an-dranomasina, dia tena ho an’ny Malagasy.
Tsy ho tompony mangataka atiny, fa kosa tena hizaka ;
Izay tsy hanaraka an’izany, dia ho avela eo hangasihasy.
Tapitra hatreo ny gaboraraka, ary ny Firenena kosa hitraka.
Raha izaho no ho Filoha, ...
Ny zavatra novokarina, alohan'ny hanondranana azy ;
Dia ahodina hatsaraina ho lafatra aloha mba hiaka-bidy.
Mba hisy fiantraikany, amin'ny fiainan'ny tsirairay avy.
Rehefa voky sy sambatra ny rehetra, dia vita ny adidy.
Ho jerena manokana, ireo lalàna amin’ny fananan-tany ;
Ka ny Malagasy nanamainty molaly, no tena mba hisitraka.
Vita hatreo ny vaky fasana, ny very taolam-paty mitomany.
Hamoraina koa ny famindrana lova, ka tsy hisy ny hisitaka.
Tsy misy ny foko ambony na ambany, ka hozarazaraina ;
Toy ny fanaon’ny mpanjanaka, ahafahany manondrana.
Izany rehetra izany anefa, mitaky ny fiovan’ny toe-tsaina ;
Satria iray ihany ny Malagasy, tsy misy tanivo na tanindrana
Tsy izaho mihitsy anefa no ho Filoha, …
Fa soso-kevitra hatsipy, sao mba misy ihany ny mandray ;
Na anjara biriky atolotra, ho fampandrosoana ny Firenena.
Ankinina amin’ny Fanahy Masina, Zanaka ary koa ny Ray.
Dia azo antoka fa ho tanteraka, ny hisian’ny fandresena
Sokajy : Aingam-panahy, embona, Eritreritra mandalo, fiainana, Hambom-po, Politika,Tanindrazana
Date de dernière mise à jour : Lun 24 sept 2018